इन्फोग्राफिक: व्यक्ति अनलाइन के गर्दैछन्?
अनलाइन गतिविधि को प्यू अनुसन्धान
व्यक्ति अनलाइन के गर्दै छन्? यो इन्फोग्राफिक उत्तर भन्छ ... बाट डेटा को3बर्ष कम्पाइल प्यू इन्टरनेट र अमेरिकी जीवन परियोजना ट्र्याकिंग सर्वेक्षण २००,, २०१० र २०११। विस्तृत अनुसन्धान मनोरन्जन, सोशल नेटवर्कि,, वित्त, समाचार, व्यापार, शपिंग, अनुसन्धान र शपिंग मार्फत हिड्दछ!
अमेरिकी वयस्कहरूमा करीव percent० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन्। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि तिनीहरू अनलाइन गरिरहेछन्? के तिनीहरू ईमेल गर्दै, अनलाइन शपिंग, वा युट्यूब भिडियोहरू स्ट्रिम गर्दै छन्? तल खोज्नुहोस्।
मान्छेहरु के गर्छन् सबै भन्दा अनलाइन गर्नुहोस्? ईमेल पठाउनुहोस् वा पढ्नुहोस्। मान्छेहरु के गर्छन् कम से कम गर्नुहोस्? ब्लग! अभाव ड्राईभ्स डिमांड ... म यो तथ्यलाई मन पराउँछु कि धेरै मानिसहरूले ब्लग गरिरहेका छैनन् ... यसको मतलब यो छ कि तपाईको सुनुवाईको अवसर उत्तम हो।
बाट इन्फोग्राफिक फ्लोटाउन - सामाजिक मीडिया मार्केटिंग अनुप्रयोग.
टैग: प्यूप्यू इन्टरनेट र अमेरिकी जीवन परियोजना ट्र्याकिंग सर्वेक्षणप्यू इन्टरनेट अनुसन्धानव्यक्तिहरूले कम्तिमा अनलाइन के गर्छन्व्यक्ति सबैभन्दा अनलाइन के गर्छन्
पछाडि बर्नरमा ईमेल नराख्नुहोस्!
खोजीको लागि भवन प्राधिकरण